I-Apple ihlaziya ngokukhawuleza ukuba semngciphekweni kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra ebonise iphasiwedi ye-SSD ezifihliweyo | Ndisuka mac
I-Apple ihlaziya ngokukhawuleza iMacOS ePhakamileyo eSierra yokuBonakalisa ukuBonakaliswa kwePhasiwedi ye-SSD ebhaliweyo
Njengesiqhelo, ngalo lonke ixesha kuqaliswa uhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza, kancinci kancinci, iimpazamo ezincinci okanye ezinkulu ziyafumaneka ekusebenzeni kwazo. Ngokukhawuleza nje ukuba i-iOS 11.0 ikhutshiwe, abasebenzisi be-Outlook bafunyaniswe bengakwazi ukumisela iiakhawunti zabo kwi-imeyile ye-imeyile, umba olungiselelwe kwiveki ephelileyo ngohlaziyo. Ngoku lithuba leMacOS ePhakamileyo yeSierra. Umphuhlisi uMatheus Mariano ufumanise ukuba sesichengeni ichaphazela kuphela ii-SSD ezifihliweyo kwaye zifomathiwe ngenkqubo entsha ye-MacOS High Sierra, APFS.
Njengoko sinokubona kwividiyo engentla, xa sifomatha idrive kwi-APFS kwaye songeza iphasiwedi yokubethela, inkqubo icebisa ukusebenzisa icebo ukuze ukwazi ukulikhumbula xa ulibele. Kodwa njengoko sinokubona, ukuba sidinga uncedo lwalo mzila, endaweni yokubonisa icebo elifunekayo lokukhumbula iphasiwedi, Yintoni eboniswayo yiphasiwedi ngokwayo.
Njengoko benditshilo ngasentla, le ngxaki yezokhuseleko, ichaphazela kuphela ii-SSD ezifihliweyo, ke ukuba ayiyiyo imeko yakho, ayikuchaphazeli konke konke. Ayichaphazeli ukuqhuba kanzima okanye okubizwa ngokuba yiFusion Drive, kuba akukho nanye kwezi modeli iyahambelana nenkqubo yefayile entsha, nangona eyokugqibela izakwenza njalo kungekudala, ngokuka-Apple kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Impazamo Kuboniswa kuphela ukuba sisebenzisa iDiski eluncedo ukukhumbula iphasiwedi yokubethela, kuba ukuba siyenza le nkqubo sisebenzisa imiyalelo kwiXesha, isiphumo esibonisiweyo sisilumkiso hayi ipassword njengoko kusenzeka kwiDisk Utility. Ngesi sihlandlo, iApple ikhawuleze ukwazisa uhlaziyo oluhambelanayo kwiMacOS High Sierra esombulula le ngxaki yezokhuseleko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ihlaziya ngokukhawuleza iMacOS ePhakamileyo eSierra yokuBonakalisa ukuBonakaliswa kwePhasiwedi ye-SSD ebhaliweyo
Kuya kufuneka balumke ngakumbi kwezi ntlobo zokungaphumeleli.
Izicelo ezininzi zinengxaki nge-MacOS High Sierra kunye nenkqubo ye-APFS
Ungayicima njani imiyalezo yakudala kwi-MacOS app